Inona no hohanina any Iceland - Food Island
7 Zavatra misakafo any Iceland
Na dia eo aza ny famantarana izay manolotra menaka sy menaka fanosokosana amin'ny fikotrokotroky ny Rekjavik, ny Icelander dia miala amin'ireo biby be mpankany be indrindra rehefa mamelona ny tenany. Ireo mpizahatany (ary ireo firenena trozona toa an'i Japana) dia mety mitazona ireo orinasa velona any amin'ny firenena, saingy rehefa miaina toy ny mponina dia tokony hifantoka amin'ny safidy maromaro azo iainana maharitra kokoa ny mpitsidika, ary hihinana alika mafana na roa aza. Ny sakafo fito manaraka dia ny Islisy no mirehareha indrindra miantso ny islandey, ary mihinana tsy tapaka. Ankoatra ny antsantsa rotaka. Io indray mandeha isan-taona lany io dia tena nentim-paharazana.
Ny fanjonoana matanjaka sy ny toekarena momba ny fambolena any Islandy dia manan-danja eo amin'ny firenena ho an'ny tanjona sy ny fanondranana entana. Ny fanjonoana manodidina ny firenena dia avo fito heny noho ny haben'ny tanimbolin'ny tenany manokana, ary raha mandidy ny Arctic charr na aiza na aiza manerana an'izao tontolo izao, mety ho avy amin'ny rano (na toeram-pambolena tompon-trondro) any Iceland - ny firenena mitarika ny tany amin'ny famokarana ny karazana. Saingy tsy misy zavatra toy ny mankafy sombin-tsaha vaovao Atlantika, kodia Atlantic na charr ao amin'io toerana io ihany no novokarina. Androany, ny isysier dia mihinana 50kg marin-drano isan-taona isan-taona araka ny fikambanan'ny Firenena Mikambana momba ny Sakafo sy ny Fambolena - izay mihoatra ny 100 kilao isaky ny olona, ​​no nizara avo roa heny isaky ny herinandro.
Buff ny mofo islandey tsara dia tsy feno raha tsy mofomamy skyr. Elspeth Velten
Aza antsoina hoe yogourt, ary lazao amin'i Icelander fa mbola misy zavatra hafa. Ity vokatra skim-ronono ity dia manakaiky kokoa ny tsiory fa tsy amin'ny yogourt satria mitongilana sy mifantoka amin'ny dingana efa vokatr'izany taona izany - dia mieritreritra bebe kokoa ny dikan-teny amin'ny masculine italiana. Ny Skyr dia natokana ho an'ny proteinina ary ambany ny matavy ary ny isyserana dia voakiana amin'izany; Ny jiro dia mampiseho ny sakafo maraina sy ny tsindrin-tsakafo (skyr cake, na iza?) ary ao amin'ny toeram-pivarotana ao amin'ny fivarotana tsotra (voahangy mba hisalasala toy ny yogourt). Izany sakafo tsy manam-pahataperana izany dia azo antoka fa tonga amin'ny fangatahana avo lenta - ny ankamaroan'ny biby fiompy any Islandy dia namboly ho an'ny orinasa mpamokatra herinaratra ao amin'ny firenena.
Raha mampirisika anao hanandrana ny sakafom-bozaka any an-toerana ianao, dia manazava aminao fa ny sangisangy eo aminao. Ny "fofom-bika" (raha toa ka misy zavatra mahasalama ny zava-manitra sy fofona ratsy) dia sakafo mahazatra avy amin'ireo razamben'i Islandy, saingy tsy misy afa-tsy ny mihinana amin'izao fotoana izao fotsiny amin'ny volana fahatsiarovana an'i Þorri, izay latsaka anelanelan'ny tara Janoary sy ny volana febroary. Soa ihany ho an'ny Islandey ankehitriny, tsy miankina amin'ny nofony intsony ny fireneny noho ny fialan-tsasatra, fa ireo mpizahatany mahaliana kosa dia mbola mipoitra mba hanandrana azy hanamarina izany any amin'ny lisitr'izy ireo any Islandy. Nanna Rögnvaldardóttir - mpanoratra malaza indrindra ao amin'ny firenena - dia nanoratra boky manontolo momba ny sakafo islandey nentim-paharazana, anisan'izany ny antsantsa mipoitra sy rojo vy, antsoina hoe Moa Misy Mihinan'ity Tontolo Ity ve? , noho izany dia azonao atao ny mamaly azy ary tsy manao.
Ny alika mafana dia tsy voamarina amin'ny fomba ofisialy ho lovam-pirenena ao Islande. Tsy ireo alika mafana ihany anefa ireo. Tsia, i Islanda dia mametraka ny sakafo haingana ho an'ny haavony manaraka amin'ny alàlan'ny famenoana felana voajanahary voajanahary miaraka amin'ny zanak'ondry, kisoa ary henan'akoho ao an-toerana, ary mandrehitra azy miaraka amin'ny kômbôbôs fitomboana izay ahitana tongolo roque sy mofomamy, ketchup, Famerenan-kira ny mayo, capers, mustard sy herbs. Afaka amin'ny toeram-piantsonan'ny bisy ao amin'ny firenena izy ireo, fa ny malaza indrindra dia hita ao amin'ny Baejarins Beztu - toerana kely ao Reykjavik izay nanolotra ny sandwich hatramin'ny taona 1930.
Ny israeliana dia mirehareha amin'ny zanak'ondriny. Ny tantsaha mpiandry ondry 2 000 dia mamela ny biby hitifitra malalaka eny an-tany malalaka manomboka amin'ny faran'ny lohataona amin'ny faramparan'ny lohataona, ary mandritra izany fotoana izany dia miondrika eo amin'ny moron-dranomasina Islandy ny ahitra ary maniry ny volon'ondry, ary miavaka amin'ny firenena iray. Rehefa tonga ny henam-bary vao tonga ny Septambra sy Oktobra, dia mandray ny mponina ao aminy mba hanjavona. Ary rehefa manomboka mitombo ny habetsaky ny hazavana rehefa ririnina, dia toy ny mampahery sy mahazendana ho an'ny Islandey toy ny tsiranoka mofomamy malaza any Etazonia ny setroka mofomamy (lasopy miaraka amin'ny legioma toy ny carrot, karaoty, ovy sy лук) .
Hitany fa ilay zanak'ondry iray izay mihosotra an-kalamanjana sy mavesatra ny tenany rehefa mikarakara be berries ary avy eo nanao alika mafana iray tsara na lasopy dia manamboatra fafana mangatsiaka. Volo matevina amin'ny mofo fofona no mihinana eo ambony latabatra mofomamy mofomamy ary indrindra mandritra ny vanim-potoanan'ny fahavaratra. Ny hena voamadina, sira ary henan-tsakafo dia mivoaka eo amin'ny sehatry ny Krismasy mandritra ny Krismasy rehefa izy io no loha-laharana fototra ary voangona amin'ny sokatra béchamel fotsy.
Ny antsasaky ny trondro alikaola any Islandy dia sitrana amin'ny orinasa sira, izay manondro ny sisin'ny moron-dranomasina, ary ny filalaovana sira mivelatra dia maneho ny sakafo fisakafoana tsara indrindra ao Reykjavik toy ny Kopar Restaurant sy Snaps Bistro sy Bar. Azonao atao ihany koa ny manantena ny hahita salmon sy trondro ao an-toerana ao amin'ny trano fisakafoanana voafidy, ary kitapo trondro maina (azo adika ara-bakiteny hoe "trondro mafy") - ny mponina dia manalefaka izany amin'ny famelana menaka eny ambony) any amin'ny fivarotana tsotra. Ary raha tena manolo-tena hiaina ny fiainana Islandey ianao dia tokony manomboka isan'andro miaraka amin'ny menaka oliva menaka Lysi ho an'ny doka omega-3 sy vitamin D (tena ilaina mandritra ny andro fohy amin'ny ririnina). Lysi dia namokatra solika trondro tany Islandy hatramin'ny taona 1938.
Mitondra any Islandy
Fitsapana fitsidihana ny Blue Lagoon any Islandy
Ny morontsiraka atsimo atsinanan'i Island akaikin'i Djupivogur
Fiheverana ny hanao dia lavitra an'i Islandy
9 Zavatra tsy tokony hatao any Islandy
Ny momba ny volkano Islandey Eyjafjallajokull
Zava-miafina malaza any Caraïbes
Arkansas State sy National Parks
Andro parlemanteran'ny Veterans 2017 tany Manassas, Virginie
Ny Chandler Fashion Center dia ny Chandler Indoor Mall
5 amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra nitsidika an'i Trip Trip Florida
Ny Reniranon'i Albuquerque
Top Picks ho an'ny trano fisakafoanana any St. Louis
Fandefasana radio ao amin'ny Rock Little
Torolalana ho an'ny Andron'ny mpifankatia any Detroit
San Juan Puerto Rico Toeram-piantsoana Gay and Hotels Guide
County San Diego: Tranon'ny Poinsettia